CD na DVD-anọgide na-achị achị na nkà na ụzụ ụwa, ọ bụ ezie na, anyị na-akpụ akpụ ọzọ kwupụta ígwé ojii Mgbakọ na òkè. Ma, nke a bụ n'ihi na ha anọgide na-kasị adaba na mgbanwe ụzọ maka na ịchekwa, na-ekerịta na-eweta data. Ma, ị ga-achọ nri ụdị DVD-ere ọkụ usoro ihe omume windows, nke mere na CD na DVD bụ àjà nsure ọkụ na ziri ezi format, na na ogugu. Ọtụtụ n'ime ndị na-ere ọkụ DVD omume bụ kpam kpam downloadable, bia loaded na atụmatụ dị ka ọkụ CD, videos na Blu-ray diski. Ha nwekwara ike inye aka na-agba ọsọ backups, na jikwaa oyiyi na disk.
Nyere n'okpuru bụ ụfọdụ n'ime n'elu DVD ọkụ usoro ihe omume windows:
Nkebi nke 1:-atụ aro DVD ọkụ usoro ihe omume windows
Wondershare DVD Creator A maara nke ọma dị ka ihe dị mfe iji ma dị ike DVD Onye Okike nke nwere ike ọkụ gị videos, audios na ihe oyiyi ike DVD. Na ugbu a na ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na Windows 10.
Part 2: The Top 5 DVD-ere ọkụ usoro ihe omume windows
Nke a bụ otu n'ime ihe ndị kasị ewu ewu ọkụ omume, na-abịa na ibu nke bara uru atụmatụ. Nke a na usoro bụ kpam kpam downloadable na ike ga-eji na-ede data diski, na n'ihi na-eke ọdịyo CDS niile music formats. E nwere ezigbo ego nke nhọrọ na elu ntọala dị, nke ka ya nnọọ irè na CD, yana elu ọgwụgwụ diski. Ọ na-enye ọrụ na ụfọdụ ezigbo ọkụ ike, na-enyekwa nza nke nhọrọ maka diski oyiyi.
Mụta ihe banyere ImgBurn >>
2. Ashampoo-ere Ọkụ Studio
A bụ ihe ọzọ free ngwá ọrụ, nke ike-eji ọkụ data disk, audio CD, na DVD. Ọ nwekwara ike-eji na-eke na-ere ọkụ na diski oyiyi. Ọ na-abịa a wuru na-CD Ripper, tinyere a ndabere ngwá ọrụ. Ọ na-adịghị akwado a otutu faịlụ formats, mgbe tụnyere ImgBurner ngwá ọrụ, ma ọ bụ nnọọ mfe iji, na ngwa ngwa erechapụ na CD na DVD.
Mụta ihe banyere Ashampoo-ere Ọkụ Studio >>
Onye a bụ onye na-ezigbo DVD ọkụ omume maka Windows. Mgbe ọtụtụ nke ọzọ na-ere ọkụ ngwaọrụ ike ga-eji na-eke naanị video DVD, DVDFlick bụ ihe authoring ngwá ọrụ, nke na-eme ndụ nnọọ mfe. Na nke a, otu onye ga-enwe ike ịgbakwunye nkiri mkpachị, na-ahọrọ họọrọ menu ndebiri, wdg The nkwado a na-nyere maka banyere 45 video formats. Na-ere ọkụ DVD bụ nnọọ mfe na ọ na-ewe nanị a click ọkụ nke DVD na CD. Ọ bụ ezie na, na menus ndị bụ isi, na ngbanwe bụ obere iji nwayọọ, ọ ka na-arụ ọrụ ezi ihe n'ụzọ dị irè, dị ka ọ na-enye ndị ọzọ DVD arụmọrụ karịa ihe ọ bụla ọzọ omume.
Nke a DVD ọkụ usoro ihe omume Windows bụ obere isi, mgbe tụnyere ndị ọzọ niile na ngwaọrụ. Nke a bụ ihu a collection nke nta ngwaọrụ na ike ga-enweta site na akara ngosi dabeere obubata. Ma, ime ihe dị nnọọ mfe, n'ụzọ kwụ ọtọ na mfe iji. E nwere ụfọdụ kpọmkwem wizards, nke nwere ike inyere-ere ọkụ na data, na-eke Video DVD na Audio CD si nchekwa. I nwekwara ike iji ihe omume a na-eke ihe oyiyi si diski. E nwekwara a CD Ripper, tinyere ngwaọrụ nke converting ọdịyo faịlụ.
Mụta ihe banyere StarBurn >>
A free ngwá ọrụ maka-ere ọkụ DVD, ọ ka nwetara a-akpali nnọọ mmasị interface. Ọ bụ nnọọ irè-ere ọkụ na data diski, video DVD, buut diski, na ọdịyo CD. Otú ọ dị, a otutu atụmatụ bụ adịghị, mgbe ị jiri ya tụnyere ndị mpi ọkụ ngwaọrụ, ma ọ bụ nnọọ mfe iji, na onye ọ bụla nwere ike ire na CD ma ọ bụ DVD, n'enweghị mesiri elu.
Mụta ihe banyere BurnAware >>
Ndị a bụ ndị ụfọdụ n'ime n'elu DVD ọkụ omume maka Windows. All ihe omume ndị a dị maka free, na pụrụ n'ụzọ dị mfe ibudatara na net. A mmemme ka ọkụ na-eke nke CD na DVD a nnọọ mfe ọrụ. Na, ndị mmadụ nwere ike ime ka otutu mbipụta n'ime-adịghị.
Olee otú iyi Video si PC ka Roku
> Resource> Windows> The Top 5 DVD-ere Ọkụ Mmemme maka Windows